आज विन्डोज-१० सार्वजनिक हुँदै , अपडेट गर्नुपुर्व जान्नैपर्ने कुराहरु - रामकुमार परियार
Home / प्रविधि / आज विन्डोज-१० सार्वजनिक हुँदै , अपडेट गर्नुपुर्व जान्नैपर्ने कुराहरु
आज विन्डोज-१० सार्वजनिक हुँदै , अपडेट गर्नुपुर्व जान्नैपर्ने कुराहरु
रामकुमार परियार Tuesday, July 28, 2015 0
माईक्रोसफ्टले आज अर्थात जुलाई २९ तारिख विश्वका १९० राष्ट्रमा एकसाथ आफ्नो बहुप्रतिक्षित तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठानिएको अपरेटिङको सिष्टम विन्डोज १० सार्वजनिक गर्दैछ । माइक्रोसफ्टले आफ्ना विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगकर्ताका लागि विन्डोज १० निशुल्क अपडेटको सुविधा उपलब्ध गराउने भनेको छ । यद्यपि प्रयोगकर्ताको मनमा विन्डोज १० का विषयमा कतिपय प्रश्नहरु होलान् । केही प्रश्नहरुको जवाफ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
विन्डोज १० का बारेमा नयाँ तथा कूल कुरा के छ ?
विन्डोज १० वास्तवमा थुप्रै नयाँ फिचर्सहरुको साथमा आउँदैछ । नयाँ विन्डोज स्टोरमा उपलब्ध हुने एप्सहरुले विन्डोज १० पिसी र विन्डोज १० वाला ट्याब्लेट दुबैमा काम गर्छन् । त्यसका साथै नयाँ माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजरमा पनि निकै उत्कृष्ट कार्यदक्षता तथा फिचरहरु रहेका छन् । प्रारम्भिक परीक्षणहरुबाट यो ब्राउजर अहिले प्रचलनमा रहेका गुगल क्रोम लगायतका ब्राउजर भन्दा कैयौँ गुणा तिव्रगतिको रहेको पाइएको छ ।
विन्डोज ८ ले त दिक्क पारेको थियो । के विन्डोज १० ले पनि त्यस्तै निरास पार्ने हो की ?
तर , विन्डोज १० अलिक उत्कृष्ट देखिन्छ । माइक्रोसफ्टले निशुल्क प्रिभ्यू संस्करण समेत उपलब्ध गराएको छ । विन्डोज इन्साइडर भन्ने प्रोग्रामको साथमा साहसीहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा यो प्रारम्भिक संस्करणको परीक्षण गर्न सक्छन् । प्रारम्भिक स्वरुपमा नै विन्डोज १० मा निकै प्रिय लाग्ने धेरै चिजहरु छन् । यसले विन्डोज १० मा सर्वोत्कृष्ट विशेषता जस्तै स्थायित्व तथा प्रयोगकर्ता मैत्रीपनालाई ग्रहण गरेको छ । त्यस्तै विन्डोज ८.१ मा रहेको टचस्कृन मैत्री फिचर पनि यसले ग्रहण गरेको छ । यी दुबैलाई मिलाएर अझ बढि प्रयोग गर्न सजिलो बनाइदिएकेा छ , कम्प्युटर र ट्याबलेट दुबैमा ।
अलिक बानी परेको जस्तो तर फ्रेस ।
माइक्रोसफ्टले विन्डोज १० लाई विन्डोजको अन्तिम संस्करण भनेको छ । अब विन्डोज ११ , १२ जस्ता नयाँ संस्करण सार्वजनिक नगरी नियमित रुपमा विन्डोज १० मै नयाँ फिचर तथा अपडेट गरिनेछ ।
विन्डोज ७ तथा विन्डोज ८ युक्त कम्प्युटरलाई अपडेट गर्दा कति खर्च लाग्छ ?
कत्तिपनि लाग्दैन । अर्कोवर्ष सम्मका लागि माइक्रोसफ्टले विन्डोज ७ , ८ तथा ८.१ युक्त कम्प्युटर , ट्याब्लेट तथा स्मार्टफोनमा निशुल्क अपडेटको सुविधा उपलब्ध गराउने छ । विन्डोज १० बाट माइक्रोसफ्टले ठूलो योजना राखेको छ । पहिले सबै विन्डोज प्रयोगकर्ताले विन्डोज १० प्रयोग गर्नेछन् र यसले वित्तिय रुपमा ठूलो सफलता दिलाउनेछ ।
विन्डोज १० को कुन भर्सन निशुल्क पाइन्छ ?
त्यसका लागि यो चार्ट हेर्नुस् ।
के मेरो ट्याबलेट तथा कम्प्युटरले विन्डोज १० थेग्छ ?
माइक्रोसफ्टका लागि विन्डोज १० सपोर्ट गर्नका लागि आफ्नो ट्याबलेट तथा कम्प्युटर निम्न क्षमताको भए पुग्छ : १ गिगाहर्ज वा त्यो भन्दा शक्तिशाली प्रोसेसर , १ गिगाबाइट र्याम (३२ बिट भर्सनका लागि ) , २ गिगाबाइट र्याम (६४ बिट भर्सनका लागि) , १६ जिबी हार्ड ड्राइभ (३२ बिटका लागि) , २० जिबी हार्डड्राइभ (६४ बिटका लागि) , डाइरेक्टएक्स नाइन वा डब्लुडीडीएम १ ड्राइभरसहितको ग्राफिक्स कार्ड , ८०० गुणा ६०० डिस्प्ले । धेरैजसो कम्प्युटरमा यो न्युनतम क्षमता हुन्छ नै । अझ त्यसलाई एकीन गर्नका लागि गेट विन्डोज १० नामक एपमा गएर परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ की तपाइँको कम्प्युटरले विन्डोज १० सपोर्ट गर्छ गर्दैन ।
त्यसो भए मैले आज पक्कै पनि विन्डोज १० प्राप्त गर्छु त ?
हो । जुलाई २९ मा विन्डोज १० प्रिइन्स्टल गरिएका नयाँ कम्प्युटरहरु पहिलोपटक बिक्रिमा राखिन लागिएको हो । यस्ता कम्प्युटर धेरै संख्यामा उपलब्ध छैनन् । किनकी धेरै कम्प्युटर निर्माताहरु नयाँ कम्प्युटर निर्माणका लागि स्कुल सपिङ तथा विदाको सिजन कुरिरहेका छन् ।
मैले यदि नयाँ कम्प्युटर किन्न चाहिन भने ?
माइक्रोसफ्टले विन्डोज १० डाउनलोडका लागि पनि उपलब्ध गराउँदैछ नी , जुलाई २९ बाटै ।
त्यसोभए जुलाई २९ मै विन्डोज १० आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सकिने भयो हैन ?
सायद । पहिलो त सुरुमा यो विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम प्रयोगकर्ताको लागि उपलब्ध हुनेछ । विन्डोजको परीक्षण कार्यक्रममा जोखिम मोलेर सहभागिता जनाएकालाई उपहारको रुपमा सुरुमै माइक्रोसफ्टले पहिलो प्राथमिकता दिएको हो । त्यसपछि केही हप्तासम्म हरेक हप्ता एक-एक समूहका विन्डोज प्रयोगकर्ताका लागि यो उपलब्ध गराइनेछ । प्रयोगकर्ताले विन्डोज १० एकैचोटी डाउनलोड गर्दा पर्ने अत्यधिक ट्राफिकबाट आफ्नो सर्भर नै डाउन होस् भन्ने माइक्रोसफ्टको चाहना छैन । सायद तपाइँले विन्डोज १० डाउनलोडका लागि लाइनमा बस्नका लागिसाइन अप गरिसक्नु भएको छ होला । माइक्रोसफ्टले विन्डोज प्रयोगकर्ताको सिस्टम ट्रेमा गेट विन्डोज १० एप मार्फत एक महिनादेखि नै विन्डोज १० अपडेटका लागि साइनअप गर्नका लागि उक्साइरहेको छ । यो एपले नै तपाइँको कम्प्युटरले विन्डोज १० थेग्छ की थेग्दैन भन्ने समेत जानकारी दिनेछ ।
मलाई विन्डोज १० डाउनलोड गर्न मनै लागेन भने के हुन्छ ?
तपाइँसँग दुइवटा विकल्प छन् । युएसबी फ्लास ड्राइभ तथा डिभिडी मार्फत पनि विन्डोज १० इन्स्टल गर्न सकिन्छ । यसरी खरीद गर्दा विन्डोज १० होम संस्करणका लागि ११९.९९ डलर तथा विन्डोज १० प्रो संस्करणका लागि १९९.९९ डलर तिर्नुपर्छ । यी दुबै संस्करण आउँदो अगष्ट ३० सम्ममा डाउनलोडका लागि उपलब्ध नहुने हुनाले पनि डिभिडी वा युएसबी ड्राइभमार्फत इन्स्टल गर्नु एउटा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।
मेरो कम्प्युटरलाई विन्डोज १० मा अपग्रेड गर्दा भएका फाइलहरु नष्ट हुन्छन् ?
होइन नी । वास्तविक डाउनलोड तथा इन्स्टल प्रक्रिया विन्डोज अपडेट पद्धतिमा हुन्छ । त्यसैले पूरानो अपरेटिङ सिस्टम हुँदा तपाइँको कम्प्युटर जे जे फाइल थिए विन्डोज १० मा अपडेट हुँदा पनि यथावत हुनेछन् । तर विन्डोज मिडिया प्लेयर लगायतका केही पूराना विन्डोज प्रोग्रामहरु भने विन्डोज १० मा हुनेछैनन् ।
विन्डोज १० लन्च गर्नका लागि माइक्रोसफ्टले केही विशेष गर्दैछ की ?
२० वर्षअघि विन्डोज ९५ लन्च गर्दाजस्तो मास मार्केट विज्ञापन तथा मिडिया आतंक यो पाला हुनेछैन । तर माइक्रोसफ्ट स्टोरहरुले भने विशेष कार्यक्रम गर्नेछन् अमेरिका भर । त्यसैले यदि तपाइँ न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, जुलाई २९ मा अरु कुनै काम छैन र गार्डेन सिटी माइक्रोसफ्ट स्टोरमा पुग्नुभयो भने विश्वकप च्याम्पियन खेलाडि एब्बी वाम्ब्याचलाई भेट्न सक्नुहुन्छ । आइफोन रिलिज हुँदाजस्तो किन्नका लागि रातभर लाइन भने हुनेछैन ।
विन्डोज १० मा केही समस्या आएर टेक सपोर्ट चाहियो भने के गर्ने ?
माइक्रोसफ्टका प्रवक्ताका अनुसार माइक्रोसफ्ट आन्सर डेस्क ,विन्डोज डट कम तथा सपोर्ट डट माइक्रोसफ्ट डट कम मार्फत विन्डोज १० प्रयोगकर्ताका समस्याको समाधानको प्रयास हुनेछ। त्यसका साथै माइक्रोसफ्ट स्टोरमा पनि आन्सर डेस्क हुनेछन् । त्यहाँ तपाइँले आफ्नो कम्प्युटर नै ल्याएर सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरुले विन्डोज १० इन्स्टल गर्न समेत सहयोग गर्नेछन् ।
केही होसियारी अपनाउनुपर्ने कुरा छन् की ?
विन्डोज १० निकै नयाँ छ अहिले , त्यसैले क्रेताहरु सचेत बन्नुपर्ला । प्रारम्भिक संस्करण परीक्षण गर्नेहरुले पनि यसमा थुप्रै कमजोरी तथा बगहरु फेला पारेका छन् । विन्डोज १० सँगै आउने माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजरले ब्राउजर एक्स्टेन्सन सपोर्ट गर्दैन । त्यसैले तपाइँ अलिक बढि सचेत नै हुनुहुन्छ भने विन्डोज अपडेटका लागि केही समय पर्खिँदानै राम्रो होला ।